ट्विटर को उपयोग गर्छ? | Martech Zone
ट्विटर को उपयोग गर्छ?
मंगलवार, मे 12, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
आज म इन्डियानापोलिस चेम्बर अफ कमर्सका लागि व्यवसाय बृद्धि संस्थानको प्यानलिस्ट थिए। भीड एकदम व्यस्त थियो, यति धेरै कि २ घण्टा विपणन र अनलाइन मार्केटिंग व्याख्या गर्न एक tad बिट आक्रामक थियो।
बोर्शफको सुसान म्याथ्यूज (ए) मिडवेस्टमा अग्रणी ब्रान्डि and र मार्केटिंग एजेन्सी) र म अनुगमन गर्न जारी राख्नको लागि हामी एक वर्कशॉप राख्न सक्दैनौं र सबै अनुरोधहरूमा पूर्ण प्रतिक्रिया दिन सक्दिनौं भनेर हेर्न हामी अनुगमन गर्नेछौं।
मार्केटिंग र सोशल मिडियाका सबै छलफलहरू जस्तै, कुराकानीमा अलि साईड ट्र्याक भयो twitter। मैले निम्न प्रश्नहरू सोधें:
कति व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायको लागि ट्विटर प्रयोग गर्छन्? केही हात।
कति मानिस ट्विटर के हो थाहा छैन? केही हात।
कति जनालाई ट्विटर के हो भनेर थाहा छैन तर यसलाई स्वीकार गर्न लज्जित छ? धेरै धेरै घबराउँछन्।
यस बिन्दुमा, एक जोडीले ट्विटरको उपयोग गर्न सुरू गर्नमा टिप्पणी गरे। पछि के भयो ट्विटरमा शोरको मात्रामा उपयोगी जानकारी विरूद्ध बनाइएका मानिसहरूले प्रभावशाली प्रभावशाली रेन्ट गरे। म सहमत छु ... र यसले ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूको ब्रेक-डाउनको निम्न चार्टलाई प्रेरित गर्‍यो।
नोट: यदि तपाईं यी तथ्या of्कहरूको शुद्धता चुनौती दिन चाहनुहुन्छ भने, कृपया मेरो पढ्नुहोस् त्याग.
पछिल्ला दुई बर्ष को लागी ट्विटर को उपयोग गरी, म माध्यम पाउन को लागी जानकारी को लागी धन्यवाद गर्छु। मलाई लाग्छ ट्विटर उत्पादक रूपमा व्यवसायको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ - तर आवाजको आवाज ठूलो हुँदै गइरहेको छ.
ट्विटरमा एक नयाँ आगमनको लागि, शोर बहिरा हुन सक्छ। सायद यही कारणले नीलसेनले यति धेरै नयाँ पहिचान गरे ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले सेवा छिट्टै छोड्दै। सुरुमा, केहीले सोचे कि प्रयोगकर्ताहरू वेब छोड्दै छन् र अनुप्रयोगहरूमा सर्दै छन्, तर नीलसेनले आफ्नो तथ्या updated्क अपडेट गरे र नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको धारणा अझै पनी ठूलो मुद्दा हो भन्ने प्रमाणित गर्‍यो।
टैग: मार्केटिंग टेक्नोलोजी रेडियोसामाजिक मिडिया मार्केटिङ
सामाजिक नेटवर्क को व्यापार
मई 13, 2009 मा 7: 15 एएम
यस्तो रोचक अवलोकन!
ट्विटर अष्ट्रेलियामा अविश्वसनीय दरमा बढ्दैछ, र हामीले हालसालै नील्सन खोजमा छलफल गरेका छौं।
समयले मलाई गलत प्रमाणित गर्दछ वा अन्यथा ………। यद्यपि मलाई लाग्छ कि एक-अफ वा सोही प्रयोगकर्ताहरू 'खेलौना' सामाजिक मिडिया सहभागीहरू हुन्, जुन मेरो स्पेस, फेसबुक, इत्यादिमा उत्तम उपयुक्त छ।
लिंकटेड इन ट्विट्टरर्सको संयोजनले हामीलाई पर्याप्त प्रस्स्पेक्ट भन्दा बढी प्रस्तुत गर्दछ …………… .. प्रोफेशनल ह्यान्डल गरिएको।
BTW डग्लस (सब भन्दा राम्रो तरीकाको मतलब) मैले तपाईको नाम कहिँ भेट्टाउन सकेन त्यसैले यस्तो निश्चित र पेशेवर जानकारीको टुक्रा कसले लेख्दछन् भन्ने बारे मलाई केही थाहा थिएन।
मई 14, 2009 मा 11: 20 PM
मेरा सबै साथीहरू वास्तवमै तपाईलाई मेरो नाम कहिँ फेला परेनन् भनेर हाँस्ने छन् ... तिनीहरू मेरो नाम सबैतिर प्लास्टर गरिएकोमा थकित छन्। 🙂
मई 13, 2009 मा 7: 23 एएम
तपाईंको साइट डगको वरिपरि राम्रो दृश्य पाएको हो …………। र दोस्रो अवलोकनमा अवतरण पृष्ठमा …………। म स्पष्ट रूपमा अँध्यारो हुँ!
मलाई लाग्छ तपाईं यसको कदर गर्नुहुन्छ: -
के ट्विटर वेब 3.0.० को सुरूवात हो? http://budurl.com/whpm